जोडी फुट्दा घाटा कसलाई ? – ramechhapkhabar.com
जोडी फुट्दा घाटा कसलाई ?
अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठलाई नेपाली फिल्मको हिट जोडी मानिन्छ । उनीहरू जोडी बनेर खेलेका अधिकांश फिल्म दर्शकले रुचाएका छन् । सुदर्शन थापा निर्देशकीय फिल्म ‘मेरो एउटा साथी छ’बाट उनीहरू पहिलो पल्ट प्रेम जोडीका रूपमा देखिएका थिए । फिल्म हिट पनि भयो ।
त्यसपछि दिनेश राउतको निर्देशनमा बनेका दुई फिल्म ‘नोभेम्बर रेन’ र ‘क्लासिक’मा पनि उनीहरूले सँगै काम गरे । दुवै फिल्म दर्शकले रुचाए । ‘क्लासिक’ पछि आर्यन र नम्रता अभिनित फिल्म ‘होमवर्क’ प्रदर्शनमा आयो । ‘होमवर्क’ले व्यवसायिक सफलता हात नपारेपनि आर्यन र नम्रताको जोडीले भने राम्रै तरिफ पाएको थियो । यस वर्ष प्रदर्शनमा आएको नम्रता श्रेष्ठ अभिनित फिल्म ‘पर्व’मा आर्यन अटेनन् । सुवास गिरीले निर्माण गरेका फिल्म र निर्देशक दिनेश राउतको निर्देशनमा बन्ने फिल्ममा आर्यन नै पहिलो रोजाई हुन्थे तर ‘पर्व’मा कोशिश क्षेत्रीको मुख्य भूमिका थियो ।
‘पर्व’मा आर्यन र नम्रताको जोडीलाई दर्शकहरुले हेर्न नचाहेका होइनन् तर विभिन्न कारणले नम्रतासँग कोशिशले रोमान्स गरे । रिलिज पूर्व फिल्म हिट हुने आशाको संकेत राम्रै देखिएको थियो किनभने ‘पर्व’को ‘काले दाई’ बोलको गीतले बजारमा उधूम मच्चाइसकेको थियो । तर, गीत हिट भएपनि फिल्म हिट हुनबाट चुक्यो । फिल्म फल्प हुनुमा धेरैले आर्यन र नम्रताको जोडी नभएको पनि अडकल काटे । ‘पर्व’ फल्प भएपछि सिनेवृतमा चलेको बहस भन्छ, ‘आर्यन र नम्रता एकअर्का बिना अपूरा छन् ।’
नम्रतालाई आर्यन बिना र आर्यनलाई नम्रता बिनाका फिल्मले पछिल्लो समय खासै साथ दिएका छैनन् । दिनेश राउतको निर्देशन, आर्यन सिग्देलको लगानी र अभिनयमा नम्रता श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहने गरि फिल्म ‘टकिला सनराइज’ निर्माण हुने कुरा थियो तर अन्तिम समयमा यो फिल्मबाट आर्यनले हात झिके । ‘क्लासिक’पछि फेरि आर्यन र नम्रताको जोडी पर्दामा फर्किने आश पालेका दर्शकका लागि यो खबरले दुखित बनायो । यो फिल्म अब नम्रता श्रेष्ठले आफ्नो लगानीमा निर्माण गर्दैछिन् ।
अब हेर्न यो बाँकी छ कि नम्रताले आर्यनसँग जोडी नबाँधि सफलता हात पार्न सफल हुन्छिन् ? आर्यन पनि ८ वर्षसम्म बोलचाल बन्द भएकी नायिका रेखा थापासँग फिल्म ‘रुद्रप्रिया’बाट पर्दामा फर्किदैछन् । ८ वर्ष अगाडिसम्म हिट मानिएको रेखा र आर्यनको जोडी के फेरि हिट सावित होला ? वा आर्यनको जोडीमा नम्रताको अभाव खड्किएला ? जे जस्तो भएपनि पर्दामा हिट लभस्टोरी जोडी फुट्दा आर्यन र नम्रता दुवैले घाटाको महशुस भने गरेका छन् ।